Inbadan oo ku saabsan BlogIN, Video | Martech Zone
The muusikada fiidiyowgaan waa mid aad u xun… Waan jeclahay! Fiidiyow kale oo weyn oo ka socda Zack Legend.
Waxaan ka shaqeynayaa dhowr qoraal oo loogu talagalay BlogIN Yar Indiana si loo soo koobo macluumaadka aan qof walba u ballan qaaday. Kaliya waan ordayaa gadaal (sidii caadiga ahayd).
Tags: Qabriga Crystaldaabacaaddamagentonaqshadda emaylka gacantafalanqaynta waqtiga dhabta ahwaqtiga dhabta ahbeegsiga cimiladaQoraalka